Archives maka May 26, 2021
by on Nwere ike 26, 2021
Etu ị ga-esi nweta ọtụtụ okporo ụzọ Gị Weebụsaịtị Iji Mgbanwe Mgbanwe
Ọtụtụ ndị debanyere aha na mgbanwe okporo ụzọ bụ ndị nwe saịtị na-anwa ịchọta okporo ụzọ na-akwụghị ụgwọ ọ bụla. E nwekwara ọtụtụ ndị ahịa na-ejikọ ahịa n'ịntanetị bụ ndị debanyere aha mgbanwe okporo ụzọ ebe ọ bụ na ha chọrọ ịkwọ ụgbọala n'okporo ụzọ njikọ ha na mgbakwunye na ndị na-ere ahịa ọnlaịnụ weebụ na-achọ ịbawanye ọtụtụ ndị ahịa ha na-ahọrọ e-mail. Enwere otutu mgbanwe ahia na Intanet… Mgbanwe okporo ụzọ ndị nwere ọtụtụ ndị na-enyekarị ezigbo nsonaazụ.
A mgbanwe ahia bụ ọrụ na-enye gị ohere ịlele saịtị onye otu, yana ndị ọzọ na-azụ ahịa ahịa ga-aga na saịtị gị. Ga-akwụ ụgwọ mgbe ị hụrụ saịtị mmadụ, mgbe ahụ, a ga-etinye akara ndị ahụ iji mee ka ndị ọzọ so na mgbanwe azụmaahịa gaa na saịtị gị.
Enwere ụdịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrị ụdịrịrị 2 dị iche iche: Ntugharị aka na sọfụfụ. Mgbanwe ahịa ahịa abụọ a ga-ewetara ndị ọbịa na saịtị gị, ojiji nke mgbanwe akwụkwọ ntuziaka nwere ike weta ndị ọbịa bụ ndị ga-enyocha ihe saịtị ahụ wee mechaa ihe ịchọrọ dị ka ịdenye aha ma ọ bụ ịzụta ziga ozi-e.
Fọdụ Mgbanwe Okporo ngeszọ nwere nhọrọ imelite ma ọ bụ "Pro Membership". Ndị otu pro na-enweta ego azụmaahịa ọzọ, uru ndị ọzọ yana ọbụlagoro ụgwọ sitere na mgbanwe okporo ụzọ.
Ọtụtụ ndị mmadụ debanyere aha na mgbanwe okporo ụzọ bụ ndị nwe saịtị na-achọ ahịa dị mma. E nwere ọtụtụ narị mgbanwe azụmahịa na …ntanetị Mgbanwe okporo ụzọ ndị nwere ọtụtụ ndị otu na-enyekarị nsonaazụ kachasị mma.
Mgbanwe okporo ụzọ bụ ọrụ na-enye gị ohere ịga na saịtị nke ndị otu, yana ndị ọzọ na-ahụ maka mgbanwe ahịa ga-aga na saịtị gị.